Sue Austin: Yakadzika gungwa kudhiraina adventures musimba rewiricheya
Posted on October 4, 2013 November 20, 2020 by csr 1687
Kunge kuverenga nhetembo, mharidzo yaSue Austin pane 'hurukuro dzeTED', inounza pfungwa yekuzvininipisa uye kuita, ruzivo rwake se wiricheya mushandisi inounzwa muchiedza chakajeka sezvaanopokana nepfungwa ye kuremara sekukuvadza pachako.
Austin ndiye muvambi we Kusununguka, Sangano rine chinangwa chekusimudzira nharaunda ye Kuremara Artists. Muna 2012, Sue Austin akakumbirwa kuti aite akateedzana eararama art uye vhidhiyo yemvura yepasi pemvura wiricheya, yakaratidzirwa sechikamu cheCultural Olympiad muEngland, kupemberera kwehunyanzvi kunoitika pamberi peOlympics neMitambo yeParalympic.
Iri kupa simba ku vanoshandisa wiricheya Kwese, kunzwa Mai Austin vachigovana nenyika kuti simba ravo wheelchair yakaunzwa rusununguko rwake rwakawanda, uye zvakamubatsira kuti ave akazvimiririra. Amai Austin's kuremara kunorambidzwa iye kubva pasi, uye zvino chigaro chake chesimba chakamusunungura kubva kumaketani. Sue Austin anoedza kubvisa iyo pfungwa kana zvisizvo kuti simba wiricheya inokutadzisa iwe kurarama wakasununguka, hombe dhizaini dhizaini uye huremu hweiyo wiricheya yemagetsi inogadzira izvi zvinoita sezvine musoro, asi anongova maonero evataridzi.
Sue Austin akarwara nechirwere chakamukuvadza kugona kufamba, ndipo paakatanga kushandisa a wiricheya. Iye anotsanangura maitiro aaive netariro kwazvo paakatanga kushandisa chigaro chake, iyo pfungwa yekugona kufamba-famba uye kufamba zvakazvimirira, kwakamuunzira pfungwa yekunakidzwa kwaari. Amai Austin vanotsanangura manzwiro avakaita paakatanga kushandisa chigaro chake, asi zvakare anotsanangura mabatirwo aakaitwa nevamwe paakatanga kuva wiricheya mushandisi, "maitiro evanhu akachinja zvachose kwandiri. Zvaiita sekunge havachandioni, sekunge jasi rekusaoneka rakanga raburuka."
Akatanga kubvunza vanhu kuti kwavo kushamwaridzana kweshoko kwaive nei wiricheya, uye ivo vaishandisa mazwi senge 'kudzikisira', 'kutya', 'tsitsi', uye 'kurambidza'.
Kuita uku kubva kuvanhu kunotungamira Muzvare Austin kuzvitarisa sevamwe vanhu vaimuona, akachinja kutenda kwake maari nekuda kwezvaitaurwa nevanhu pamusoro pake. Izvi zvakamutungamira kuti ave muratidziri panyaya iyi, aifanira kuzviwana zvakare, uye akafunga kuzviita kuburikidza nekugovana ruzivo rwake, uye kutsvaga kutsva rondedzero dzekutora chivimbo chake.
Imwe nzira yaakaita izvi yaive yekushanda nechikwata kugadzira iyo kuzvifambisa wiricheya iyo inoshanda pasi pemvura, ichibvumira Sue kutsva asina kusiya chigaro chake.
Ndakaona kuti scuba giya rinowedzera huwandu hwako hwezviitiko nenzira imwechete iyoyo wiricheya anodaro, "anodaro muhurukuro yake," asi kushamwaridzana kwakabatana nescuba gear ndekwemufaro uye kunakidzwa - kwakasiyana zvachose nemhinduro dzevanhu kune wiricheya. Saka ndakafunga, 'Hameno chii chichaitika kana ndikaisa mbiri pamwechete?'
Pakutanga, chinangwa chakaratidzika zvisingaiti: “Patakatanga kutaura nevanhu nezvazvo, mainjiniya aiti hazvishande, iyo wiricheya yaizopinda mukutenderera, yanga isina kugadzirwa kuti ipfuure nemvura - asi ndaive nechokwadi kuti yaizodaro, ”Austin akaudza BBC. Asi zvinhu zvakaitwa, uye mhedzisiro yacho inoshamisa. "Kana iwe ukangoisa thruster pasi pecheya simba rese riri pazasi pegiravhiti saka unotenderera," akadaro. "Chaive chakanyanyisa kurira kupfuura zvandaifungira." Tedx Blog Nhau
Karman Healthcare ichagara ichitsigira kusimudzira uye kufambira mberi kweiyo wiricheya munharaunda, isu tiri vateveri vevanhu vakaita saSue Austin, vanogovana zvavakaona kubatsira kubatsira kuwedzera kunzwisiswa kwerusununguko mu wiricheya. Semazuva ese, isu takatsaurirwa kubatsira vanoshandisa wiricheya tsvaga iyo yakakwana wiricheya nokuda kwavo mararamiro, tinokukurudzira kuti utaure nesu maererano nechero ipi mhando of wiricheya mhinduro kana matambudziko aungave uine. Hatigone kutenda Sue Austin zvakakwana nekuda kwekushanda nesimba uye kuzvipira kwaakaisa mukuvandudza uye kunzwisisa kweiyo wiricheya vemunharaunda.